Mon State Supreme Court - သတင်းများ
မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်နှင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တရားရုံးအသီးသီးတို့၏ တရားစီရင်ရေး၊ စီမံနှင့်ထောက်ပံ့ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးညီညီစိုးသည် မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် လက်အောက်ရှိ ခရိုင်တရားရုံးများနှင့် မြို့နယ်တရားရုံးများမှ တရားသူကြီးများနှင့် ( ၂၅ - ၆ - ၂၀၂၁ ) ရက်နေ့ ၁၅:၀၀ အချိန်၌ Covid စည်းကမ်းချက် များနှင့်အညီ Video Conferencing ( Zoom Meeting ) စနစ်ဖြင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည်။
အစည်းအဝေးသို့ မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်မှ တရားသူကြီးများ ၊ ပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ ၊ ဦးစီးအရာရှိများအပါအဝင် မော်လမြိုင် ခရိုင်တရားရုံးနှင့် သထုံခရိုင်တရားရုံးတို့မှ ခရိုင်တရားသူကြီးများနှင့် ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီးများ၊ မော်လမြိုင်မြို့နယ်တရားရုံး ၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်တရားရုံး ၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်တရားရုံး ၊ မုဒုံမြို့နယ်တရားရုံး ၊ သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်တရားရုံး ၊ ရေးမြို့နယ်တရားရုံး ၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်တရားရုံး ၊ ဘီးလင်းမြို့နယ်တရားရုံး၊ သထုံမြို့နယ်တရားရုံး၊ ပေါင်မြို့နယ်တရားရုံးများမှ မြို့နယ်တရားသူကြီးများနှင့် တွဲဖက်မြို့နယ်တရားသူကြီးများ၊ ဒုတိယမြို့နယ်တရားသူကြီး နှင့် ဒုတိယဦးစီးမှူး စုစုပေါင်း ( ၄၄ ) ဦး တက်ရောက်ကြသည်။
အစည်းအဝေးတွင် တရားစီရင်ရေး၊ စီမံနှင့်ထောက်ပံ့ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ( ၁၆း ၀၀ ) နာရီတွင် အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။
မွန်ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်သည် တရားရုံးသစ် တည်ဆောက်နေမှုအား သွား​ရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နှင့် တိုင်း‌ဒေသကြီး / ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်များ၊ တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်တရားတရားရေးဦးစီးမှူးများ၏ ( ၂၁ ) ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ထပ်ဆင့်ရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ
Copyright © 2019 High Court of Mon State. All Rights Reserved.
Email : mon.hc@mptmail.net.mm